Atemmufo 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
8 Na Efraimfo bisaa no sɛ: “Dɛn na woayɛ yɛn yi? Adɛn nti na wo ne Midianfo rekɔko no woamfrɛ yɛn?”+ Enti wɔne no hamee denneennen.+ 2 Ɛnna obuaa wɔn sɛ: “Dɛn na mayɛ a ɛsen mo de?+ Bobe ase nkae a Efraim sesawee+ no nye nkyɛn bobe a Abiesar+ atwa aboaboa ano? 3 Mo nsam na Onyankopɔn de Midianfo akunini Oreb ne Seeb+ ahyɛ. Dɛn na mayɛ a ɛbɛto nea moayɛ yi?” Ɔkaa saa no wɔn bo dwoe.+ 4 Afei Gideon ne mmarima ahasa a wɔka ne ho no beduu Yordan ho na wotwae. Na wɔabrɛ de, nanso wɔkɔɔ so ara tiw wɔn. 5 Akyiri yi ɔka kyerɛɛ Sukotfo+ sɛ: “Mesrɛ mo, momma mmarima a wodi m’akyi yi paanoo nni,+ efisɛ wɔabrɛ, na meretiw Midian ahene Sebah+ ne Salmuna.”+ 6 Nanso Sukot atitiriw no kae sɛ: “Wo nsa aka Sebah ne Salmuna awie na yɛmma wo dɔm paanoo yi?”+ 7 Na Gideon buae sɛ: “Eyi nti sɛ Yehowa nya de Sebah ne Salmuna hyɛ me nsa a, mede sare so nsɔe ne ohwirom bɛtetew mo nam.”+ 8 Na ofi hɔ kɔɔ Penuel+ de asɛnkoro no ara kɔtoo wɔn anim, nanso nea Sukotfo kae no ara na Penuelfo nso ka kyerɛɛ no. 9 Ɛnna ɔka kyerɛɛ Penuelfo nso sɛ: “Sɛ mesan ba asomdwoe mu a, medwiriw abantenten yi agu fam.”+ 10 Saa bere no na Sebah ne Salmuna+ ne wɔn dɔm wɔ Karkor. Ná Apueifo+ dɔm a aka nyinaa yɛ mpem dunum, efisɛ na asraafo mpem ɔha aduonu a wɔtwe nkrante atotɔ wɔ akono.+ 11 Gideon toaa so kɔfaa wɔn a wɔte ntamadan mu no kwan so wɔ Noba ne Yogbeha+ apuei, na ɔtow hyɛɛ asraafo no so bere a wɔn ani nni wɔn ho so.+ 12 Midian ahene baanu no, Sebah ne Salmuna,+ guanee na otiw wɔn ntɛm ara kɔkyeree wɔn. Na ɔmaa ehu kaa asraafo no nyinaa. 13 Afei Yoas ba Gideon fi akono kɔfaa ɔkwan a ɛforo kɔ Heres no so san bae. 14 Bere a ɔnam kwan so reba no, ɔkyeree aberante bi a ofi Sukot+ bisabisaa no nsɛm.+ Na ɔkyerɛw Sukot atitiriw+ ne wɔn mpanyimfo din maa no. Ná wɔyɛ mmarima aduɔson ason. 15 Ofi hɔ no, ɔkɔɔ Sukotfo so kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sebah ne Salmuna ni. Wɔn nti na mutwaa me mpoa sɛ, ‘Wo nsa aka Sebah ne Salmuna awie na yɛmma wo mmarima a wɔabrɛ no paanoo yi?’”+ 16 Ɛnna ɔkyeree kurow no mu mpanyimfo, na ɔde nsɔe ne ohwirom kyerɛɛ Sukot mmarima no nyansa.+ 17 Na odwiriw+ Penuel+ abantenten no gui kunkum kurom hɔ mmarima. 18 Afei obisaa Sebah ne Salmuna+ sɛ: “Mmarima a mukum wɔn wɔ Tabor+ no te dɛn?” Na wobuae sɛ: “Wɔte sɛ wo ara; wɔn nyinaa te sɛ ahene mma.” 19 Ɛnna ɔkae sɛ: “Wɔyɛ me nuanom, me maame mma. Na sɛ Yehowa te ase yi, sɛ moankum wɔn a, anka me nso merenkum mo.”+ 20 Na ɔka kyerɛɛ ne ba panyin Yeter sɛ: “Sɔre kum wɔn.” Nanso aberante no antumi antwe ne nkrante wɔ wɔn so; na ɔyɛ aberantewa,+ enti na osuro. 21 Ɛnna Sebah ne Salmuna kae sɛ: “W’ankasa sɔre na kum yɛn, na sɛnea ɔbarima te no, saa ara na ne mmarimasɛm te.”+ Enti Gideon sɔre kum+ Sebah ne Salmuna na ɔfaa nnwinne a ɛte sɛ ɔsram a ɛdeda wɔn yoma kɔn mu no. 22 Akyiri yi Israelfo ka kyerɛɛ Gideon sɛ: “Wo ne wo mma ne wo mmanana nni yɛn so,+ efisɛ woagye yɛn afi Midianfo nsam.”+ 23 Na Gideon ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Me de, merenni mo so, na me ba nso renni mo so.+ Yehowa na obedi mo so.”+ 24 Gideon toaa so ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mepɛ sɛ moyɛ biribi ma me: Obiara mfa hwenem kawa+ a onyae sɛ asade no mma me.” (Ná wɔn atamfo no yɛ Ismaelfo, enti na wɔwɔ sika hwenem nkawa.)+ 25 Na wɔkae sɛ: “Yɛde bɛma wo.” Enti wɔde ntama sɛw fam, na obiara de hwenem kawa a onyae no guu so. 26 Sika hwenem nkawa a ogyei no ano si sika nnwetɛbona apem ahanson. Eyi nka nnwinne a ɛte sɛ ɔsram+ ne asomuade ne ntade kɔkɔɔ+ a na ɛhyehyɛ Midian ahene no, ne kɔnmuade a ɛdeda yoma kɔn mu+ no ho. 27 Gideon de yɛɛ asɔfotade+ na ɔde kɔkyerɛe wɔ ne kurom Ofra.+ Nanso Israelfo dan no ohoni na wɔne no bɔɔ aguaman,+ na ɛbɛyɛɛ afiri maa Gideon ne ne fiefo.+ 28 Na Israelfo dii Midianfo+ so nkonim, na wɔantumi amma wɔn ti so bio, na asase no so dwoe mfe aduanan wɔ Gideon bere so.+ 29 Na Yoas ba Yerubaal+ san kɔtenaa ne fie. 30 Gideon nyaa mmabarima aduɔson+ a wofi n’ankasa asen mu, efisɛ na ne yerenom dɔɔso. 31 Na ɔwɔ ɔyefam bi wɔ Sekem, na ɔno nso woo ɔbabarima maa no. Na ɔtoo no din Abimelek.+ 32 Akyiri yi, Yoas ba Gideon wui a na nna amee no, na wosiee no wɔ ne papa Yoas amusiei wɔ Abiesarfo+ kurow Ofra mu. 33 Bere a Gideon wui ara pɛ na Israelfo no san ne Baal kɔbɔɔ aguaman,+ na wɔde Baal-Berit yɛɛ wɔn nyame.+ 34 Na Israelfo ankae Yehowa wɔn Nyankopɔn+ a ogyee wɔn fii wɔn atamfo a wɔatwa wɔn ho ahyia nyinaa nsam no.+ 35 Na nnepa a Yerubaal anaa Gideon yɛe wɔ Israel nyinaa akyi no,+ Israelfo anyɛ ne fiefo adɔe+ antua ka.